Mbola Mijoro Ho An’ny Zony Ireo Siliana Mpianatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2017 5:15 GMT
Voalohany tao anatin'ny 15 taona mahery izao fiaraha-mirindran'ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana izao mba hahatonga ny fanangonan-tsonia ataony ho henon'ny fanjakana. Hatreto dia efa nahahetsika mpianatra mihoatra ny 150.000 ry zareo. Ahoana no fomba nanaovany izany? Mampiasa ny teknolojia. Samy manana blaogy avokoa izy rehetra, mampiasa messenger, imailaka, ary ny blaogin-tsary. Nanome fahafahana azy ireo mba hihetsika haingana sy hiserasera manerana ny firenena ireo fitaovana ireo. Ato no misy ny lisitra feno misy ireo sekoly rehetra.
Tamin'ity herinandro ity, teny an-dalamben'ny renivohitra nanao hetsika am-pilaminana izay nidiran'ny jiolahimboto ry zareo. Tena henjana tokoa ny polisy ary tsy maintsy nanao fialantsiny imasom-bahoaka noho ny fomba nitondrany ireo mpianatra. Nizara sary sy lahatsary mikasika ilay zava-nitranga i “Grafica Rebelde” .
Tamin'ny fahitalavitra omaly alina, novalian'ny Filoha Michelle Bachelet ny fangatahana. Nanome fisoratana maimaimpoana sy fitaterambahoaka ho an'ireo izay tra-pahasahiranana izy ary azo ampiasaina 24 ora sy amin'ny faran'ny herinandro ny taratasy fahazoandàlan'ireo mpianatra ankehitriny. Nanokatra olana vaovao ity fanambarana ity satria tsy manaiky ilay vahaolana ny fikambanan'ireo mpitatitra. Sekolim-panjakana miisa 510 no hanatsara ny fotodrafitrasany ary sekoly 1200 ihany koa no hahazo tombontsoa amin'ny fanaka vaovao. Nanambara ny fananganana filankevi-panabeazana vaovao ihany koa izy, izay hiandraikitra ny raharaha momba ny mpianatra ary hanao fanovàna amin'ny lalàna aminy. Mizara ampahany tamin'ilay fanambarana i Zaiditawaxona (ES) ary milaza fa tsy miombon-kevitra amin'ilay tolokevitra manontolo.
Fomba fijery iray hafa no avy amin'i Petruska (ES) izay manoratra ”Izaho mihevitra fa tsy dia tena hoe ratsy toy izany ny fampianarana, satria nampianatra zavatra tena mahasoa antsika, mba hitambatra ho amina tombontsoa iraisana ny olona.”
Mbola manapa-kevitra momba ireo vahaolana ireo ny mpianatra. Raha tsy miombon-kevitra amin'ny tolokevitr'i Bachelet izy ireo, dia mbola hisy fitokonana manerana ny firenena indray amin'ny Alatsinainy. Iray amin'ireo sekolim-panjakana no nanoratra tao amin'ny blaoginy (ES) fa ”teneno ireo filoha sy delegasiona rehetra avy amin'ireo fianarana fa hanao fihaonana miaraka amin'ny olona manam-pahefana isika amin'ny Alatsinainy faha 5.”
Mba hahatsapana hatramin'ny bitika indrindra ny eritreritra sy fihetseham-pon'ireo mpianatra tao anatin'izay herinandro vitsivitsy izay, nanao tatitra isanandro ny “In Plain Words” ary efa nankany amin'ireo fianarana ihany koa nandritra ny fitokonana mba hizara sary mikasika ny fiainan'ny mpianatra nandritra ilay fibodoana nitranga.
Tsy maintsy andrasantsika ny hatramin'ny Alatsinainy 05 Jona isika mba hahafantarana izay hiseho.